၁၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် Energizer Power Max P16K Pro၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်ပြသမည် | Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | ဘက်ထရီ, မိုဘိုင်း, UHI, NOTICIAS
သင်ဤဖော်ပြချက်များစွာကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည် ဘာစီလိုနာ၏ Mobile World Congressအလွန်ကြီးမားသောနည်းပညာဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်သည်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏တင်ဆက်မှုနှင့်တင်ဆက်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်သတင်းကောင်းများစွာပြင်ဆင်ထားသည်မှာသေချာသည် Energizer Power Max P16K Pro၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော 16.000mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်။ ဒီမျှတမှုကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာတရားမျှတမှုဟာသတင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုကတိပေးထားသည့်ပင်နည်းနည်းလေးသောဆုတ်ယုတ်မှုပင်မရှိပါ။
လအနည်းငယ်အကြာ, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည် စွမ်းအင်ပါဝါမက်စ် P6000S၄၅၀၀mAh ဘက္ထရီကြီးမားသည့်အခြား terminal တစ်ခု ... သို့သော်ကောင်းပြီ၊ Energizer Power Max P4.500K Pro ခေါင်းစဉ်သို့ပြန်သွားသည်။ ဒီမိုဘိုင်း၏ထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပေါ် skimped မထားပါဘူးလျှပ်စစ်စွမ်းအားယုန်၏ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ P16K ကတစ်လုံးမဟုတ်၊ နှစ်ခုမဟုတ်ဘဲကန့်သတ်ချက်ရှိသော်လည်းပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကတိပေးခဲ့သည် ပလပ်ဂင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်ပဘက်ထရီကြောင့်စိတ်ပူရန်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဒီထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ဘက်ထရီဖြစ်ပုံရတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 25 ရက်နေ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ပင်ငါတို့သည်မြင်ကြလိမ့်မည် Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 +, တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အထင်ကရ။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သာမကဘဲထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် ၅.၉၉ လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်ရှိပြီး 5.99 x 2.160 pixels resolution ရှိသည်, အရာက 18:9ရှုထောင့်အချိုးအစား format နဲ့လာသည်ဟုဖော်ပြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤကိရိယာသည် Mediatek Helio P25 SoC ကိုတပ်ဆင်သည် 6GB RAM နှင့် 128GB internal storage space တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်း, Power Max P16K Pro တွင် 13 + 5MP dual အနောက်ကင်မရာနှင့် LED Flash တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်အရှေ့ဘက်တွင် selfie နှင့် video call များအတွက် 8 megapixel sensor ရှိသည်။
ဒီတော့ဝေး, ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသောထူးခြားချက်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ ဤဆိပ်ကမ်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအထက်ပါတင်ပြသည့်နေ့အထိစောင့်ရမည်။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ထူသောဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်၊ ၎င်းသည်အထူ ၁၀ မီလီမီတာထက်နည်းသောပါးလွှာသောဒီဇိုင်းရှိမည်. ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၁၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် Energizer Power Max P16K Pro၊ ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်ပြသမည်
သင်၏ Android ကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် application တစ်ခု။ တစ်ရက်တည်းသာလျှင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။